झापामा सहुलियत मूल्यको चामल विक्री शुरु
असोज १०, झापा । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बिर्तामोड कार्यालयले चाडपर्व लक्षित गरेर सहुलियत मूल्यमा उपभोक्तालाई चामल विक्री गर्न शुरु गरेको छ ।
कार्यालयले नौ हजार क्विन्टल चामल सहुलियत मूल्यमा विक्रीका लागि राखेको कार्यालयमा प्रमुख देवेन्द्र राईले बताए । कार्यालयबाट दैनिक १२/१५ जनाले मात्र खरीद गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए ।
हालसम्म २३ क्विन्टल चालम विक्री भइसकेको छ । उनका अनुसार सरकारले यसपटक चामलमा प्रतिकेजी रू. पाँच अर्थात् आठ प्रतिशत मात्र छूट दिएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण जिल्लामा गरिएको निषेधाज्ञा अवधिभर कार्यालयले २० प्रतिशत छूटमा चामल विक्री गरेको थियो । सो समयमा दैनिक २०० भन्दा बढी चामल किन्न आउनेको भीड नियन्त्रण गर्न कुपन लागू गर्नुपरेको थियो ।
उनले कार्यालयले सोना मन्सुली, बासमती र स्टिम जिरा मसिनो चामल सहुलियत मूल्यमा विक्री गरिरहेको बताए ।
चामल खरीदकर्ताले एक पटकमा तीनै प्रकारका चामल एक/एक बोरा खरीद गर्न सक्ने तर एउटै प्रकृतिको चामल भने एक बोरा मात्र खरीद गर्ने सकिने उनको भनाइ छ ।
कार्यालय प्रमुख राईले बासमती चामलको बजार मूल्य प्रतिकेजी रू. १०६, स्टिम जिरा मसिनोको रू. ६५ रहेकामा कार्यालयले प्रतिकेजीमा रू. पाँच छुट दिएर विक्री गरिरहेको बताए । ‘चाडपर्व आउन अझै निकै दिन बाँकी छ’, उनले भने, ‘मानिसले पैसा जोहो गर्दै हुनुहुन्छ होला । थोरै भए पनि सहुलियत छ, आइहाल्नुहुन्छ नि !’
असोज १ गतेदेखि दसैँ, तिहार र छठलाई लक्षित गर्दै विक्री शुरु गरिएको चामल कात्तिक २४ गतेसम्म विक्री हुने जानकारी दिइएको छ । कार्यालयबाट सहुलियत मूल्यको चामल पहाडी जिल्ला इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ पठाइने उनको भनाइ छ ।
सरकारले उपभोक्तालाई चाडपर्वमा खाद्यवस्तु, चामल, गहुँ, दाल, चिउरा, आटाको पिठो, तोरीको तेल, सनफ्लावर तेल सहुलियत मूल्यमा विक्रीका लागि अनुमति दिए पनि कार्यालयमा भने चामल मात्र रहेको प्रमुख राईले जानकारी दिए । रासस